တွေ့ ဆုံပွဲရောက် Member တစ်ဦးအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » တွေ့ ဆုံပွဲရောက် Member တစ်ဦးအကြောင်း
တွေ့ ဆုံပွဲရောက် Member တစ်ဦးအကြောင်း
Posted by moonpoem on Jun 5, 2011 in Events/Fundraise, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 41 comments
တွေ့ ဆုံပွဲရောက် မန်ဘာတစ်ဦးအကြောင်း
ယနေ့ မနက် တနင်္ဂနွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကျွန်မ အားရပါးရ အိပ်လိုက်သည်မှာ
၁၀နာရီထိုးမှနိုးသည်။ မန်ဘာတွေ့ ဆုံပွဲချိန်းထားသည့်အချိန်သည် ၁၁နာရီဖြစ်သည်ကို
လည်း သတိရမိသည်။ တွေ့ ဆုံရန်နှိုးဆော်ထားသူက ကိုယ်ဖြစ်ပြီး နောက်ကျနေပါက
မန်ဘာသူငယ်ချင်းများ ဆူမှာ ဆဲမှာ ကြောက်သည့်အတွက် မြန်မြန်ရေချိုးကာ တော်ဝင်စင်တာသို့ သွားသည်။
တော်ဝင်စင်တာအောက်ထပ်တွင် A4 စာရွက်ကိုင်ထားသူများတွေ့ သော်လည်း သူတို့ က အဖြူရောင်အင်္ကျီဖြင့် မဟုတ်ကြ ။
ထို့ အပြင်ချိန်းထားသည်မှာကလည်း တော်ဝင်စင်တာ အောက်ထပ်တွင် မဟုတ်။ ပထမထပ်ရှိ
မောနင်းစတားဖြစ်သည့်အတွက် သူတို့ မဟုတ်ဟု ထင်သည်။ ထို့ ကြောင့်
အပေါ်ထပ်သို့ ပင်တက်သွားလိုက်သည်။ အပေါ်ထပ်တွင် အကျီင်္ အဖြူရောင်
၀တ်ထားပြီး ထိုင်နေသည့် စုံတွဲတွေ ကို တွေ့ သည်။ ထို့ နောက် မိသားစုလိုက်
၀င်လာကြသော သူများကိုလည်း တွေ့ သည်။ မိသားစုဆိုတော့လည်း မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်သည်။
ဒီတော့အချိန်စောသေးလို့ ပဲ မလာတာ ဟုထင်ပြီး ကော်ဖီမှာသောက်သည်။
၁၅မိနစ်အကြာတွင် ဗိုက်ဆာသဖြင့် ထမင်းမှာစားသည်။ အအေးတစ်ခွက်သောက်သည်။
မောနင်းစတား စားပွဲထိုးမန်နေဂျာကို ပင် အဖြူရောင် နှင့် အနက်ရောင် ၀တ်ထားသည့်အတွက်
မန္တလေး ဂေဇက် မန်ဘာ လားဟု မေးလိုက်မိသဖြင့် အနည်းငယ်
အရှက်ကွဲခဲ့ပါသည်။ ဘေးနားမှ ၃ယောက်ထိုင်နေသော ၀ိုင်းရှေ့တွင် မြေပုံစာရွက်လိုက်
ချထားသဖြင့်စားပွဲထိုးကို သွားရှိူးပြီး မေးခိုင်းလိုက်သေးသည်။ ဘယ်သူမှ ဟုတ်ပုံမရပါ။
၁၂နာရီထိုးသည့် အချိန်အထိ အရိပ်အရောင် မတွေ့ သဖြင့် ဟိုပတ်ဒီပတ်လုပ်ပြီး
အိမ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သူငယ်ချင်းတွေ မအားလို့ပဲလား ။လာပြီး မတွေ့ မိကြတာပဲလားတော့
မသိပါ။ ကျွန်မကတော့ တစ်ယောက်ကိုမှ မတွေ့ ခဲ့ပါ။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မကတိ
အတိုင်းရောက်အောင်လာပြီး ခုံနံပါတ်၂၀တွင် တစ်ယောက်တည်း ထိုင်ကာ
စားပြီး သောက်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ကံမကြုံလို့ မဆုံဖြစ်ကြသေးတာဟုပဲ ထင်ပါသည်။
နောင်တစ်ချိန်ချိ်န်ပေါ့ သူငယ်ချင်းတို့ ရယ်။
တွေ့ချင်လို့ မသိမသာ လာသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။
nature ကလာခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ဆိုင်ထဲကို ၀င်မထိုင်တာလဲ။
မှတ်ချက်။ ။ လာဖြစ်ပြီး ဆိုင်ထဲမှာ ရှိလျက်နဲ့ လွဲခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်နားမှာ ထိုင်ခဲ့တာ ဘယ်လိုပုံစံ ဆိုတာပြောပြပေးပါနော်။ ကျွန်မက ဘယ်သူ့ ကိုမှ မတွေ့ ခဲ့ရပေမယ့် ဆိုင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ ပုံစံကိုမှတ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ တွေ ပြောပြရင်တော့ မှတ်မိမယ် ထင်တယ်။ အင်္ကျီအဖြူရောင် ပါတိတ်လုံချည်နဲ့ အစ်မ၊ အကျီ င်္အဖြူ နဲ့ ဘောင်းဘီတို ၀တ်ထားတဲ့ ကောင်မလေး ချောချောလေး နှစ်ယောက်ကို တော့ တွေ့ တယ် ။ သူတို့ က ကောင်လေးတွေ နဲ့ ဆိုတေ့ာ မဟုတ်ဘူးလို့ တော့ ထင်ပါတယ်။
“အကျီ င်္အဖြူ နဲ့ ဘောင်းဘီတို ၀တ်ထားတဲ့ ကောင်မလေး ချောချောလေး နှစ်ယောက်”
ဆိုတော့ .. စိတ်ဝင်စားတွားတယ်..
” ကောင်လေးတွေနဲ့” ….တဲ့…
ကျွန်တော်တက်ရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး မတက်ရောက်နိုင်အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါဈ
လာချင်ပေမယ့် အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ မလာဖြစ်တာပါ
တာဝန်ကျေပွန်လွန်းရင် လူမှုရေးဘက်မှ အားနည်းတတ်တယ်တဲ့
အဲဒါကြောင့် King (တကယ့်king တော့ မဟုတ်ပါဘူး ခပ်ကင်းကင်းနေကြလွန်းလို့ပါ) ဆိုတဲ့အတိုင်း
အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ကင်းကွာနေသူတစ်ယောက်မို့ နားလည်ပေးပါ …
နောက်တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ရက်ရှည် ယူထားမည်ဖြစ်ကြောင်းပါ
ကျမက အဝေးကိုရောက်နေပေမယ့် ဒီမန်ဘာတွေ့ဆုံပွဲ သတင်းလေးကို နားစွင့်နေမိတာ။ အဲဒီလို ကတိမတည်တာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။ သွားရတဲ့သူက ကြောင်တာပေါ့နော်….
M G ရဲ့ မန်ဘာအဖွဲဝင်တယောက်အနေနဲ့ လာချင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလာလို့ မရသည့်အတွက်..မလာနိုင်တာကိုခွင့်လွတ်ပါ… ချိန်းထားပြီး မလာနိုင်သူများကို အကြာင်းကြာင်းတွေရှိကြပေမဲ့ ဂတိမတည်သောသူများ အပေါ်ယံ ရွှေမှုံ ကျဲ ကြောက်စရာကောင်းသော သရဲဘောကြောင်သော စိတ်ထားပိုင်ရှင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်..လာကြည့်ပြီး ပြန်သွားသူများလည်း ရှိကောင်းရှိနိင်ပါတယ် ..နေရာမှားပြီးရောက်သွားတာလဲ ရှိကောင်းရှိနိင်ပါတယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဂတိတည်သူ မန်ဘာအချင်းချင်းခင်မင်ချင်သူအနေနဲ့ moonpoem ကို အထူးပဲ လေးစား ဂုဏ်ယူပါတယ် ခင်ဗျားးးးးးးးးးးး
Nature က … တွေ့ချင်လို့ မသိမသာ လာသွားတဲ့သူဖြစ်မယ် … ကြည့်ရတာ … ဒီကတော့ သိတာ တစ်ရက် နောက်ကျသွားလို့ မဟုတ်ရင် ကိုယ်လည်း အူလည်လည်ဖြစ်မှာသေချာတယ် ..
moonpoem အနေနဲ့လည်း ငါ့နယ် ညံ့လိုက်တာနော်လို့ဆိုပြီး
သွားတုန်းက ကိုင်သွားတဲ့ A4 စာရွက်ကို
ရေစိမ်ပြီးသာက်သင့်တယ် :D :D :D
နောက်ကျသွားတော. မမှီတော.ဘူးထင်တာ ဆိုင်ထဲဝင်ထိုင်သေးတယ် လက်ထဲမှာလဲစာရွက်လိပ်ပြီးကိုင်ထားသေးတယ်ဗျာ
ကျနော်ထိုင်သွားတာက ဆိုင်ထောင်.တည်.တည်လေ ဆိုဖာ ဆက်တီနဲ. ခုံမှာထိုင်သွားတာ အင်္ကျီကတော. အဖြူနဲမဟုတ်ဘူးဗျာ
အမှန်ပြောရရင်တော့ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာဆိုသလိုပေါ့။ မနော နည်းနည်း ၀င်ပြီး ဆရာလုပ်ကြည့်တာ။ စပြီး တွေ့ဆုံပွဲလုပ်မယ်ဆိုကတည်းက နောက်တာလို့ လူတွေက ထင်သွားတာက တစ်ကြောင်းပေါ့လေ… နောက်တစ်ချက် ဒီမှာက လူငယ်တွေကြီးပဲ စုနေတာမဟုတ်သလို လူကြီးတွေကြီးပဲလည်း ဖတ်မှတ်ရေးသားနေတာ မဟုတ်တော့ လူကြီးလူငယ်အရွယ်စုံရှိတာပေါ့။ ဒါကို တွေ့ဆုံပွဲအတွက် တစ်ယောက်ယောက်က ဦးဆောင်ပြီး နေရာအတိအကျ လူဦးရေ ဘယ်သူတွေလာမယ်ဆိုတာ အရင်စလုပ်ထဲက အတိအကျလုပ်သင့်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲဖတ်မိလိုက်ထဲက ရှုံးနိမ့်သူနှင့် မွန်းပါဝါပဲ တွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေတာကို သိထားခဲ့ပါတယ်။ ခုရှုံးနိမ့်သူနဲ့ပါ မတွေ့ဖူးဆိုတော့ တစ်ယောက်ထဲသွားရတဲ့သူအတွက် မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒီလိုမှန်းသိရင် မနောလာခဲ့ပေးပါတယ်။ လေးဖက်ကတော့ လာချင်ပေမယ့် လူငယ်တွေကြားထဲဆိုတဲ့အတွေး ရှိနေတာဟာ နည်းနည်းတော့ ပြင်ပေးပါဦးနော်။ ခုလိုနည်းပညာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာ လူကြီးလူငယ်ရယ်ဆိုတဲ့အတွေးမရှိတော့ပါဘူး။ စိတ်တူရင် လူတူပါတယ်လို့ ဒီနေရာကနေ ပြောလိုက်ပါရစေရှင်…
နောက်ကျပြီးမှရောက်လာတဲ. အတွက်တော. အစ်မ တို.တွေကို
သေချာတဲ့တွေ့ဆုံပွဲ တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ဖိတ်စာတွေ ပို့ဖို့ လိုပါတယ်. ဖိတ်စာတွေနဲ့မှ လာလို့ရမယ် . ခုက စနောက်တယ်ထင်ပြီး မလာကြတာပါ.. နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြီး ဆုံဖို့ချိန်းကြရအောင်နော် အဖွဲ့ဝင်များ
E ပေးလိုက်ပေါ့ ပြီးရင်
E ထဲကနေ အတည်ပြု
E ထဲမှာဘဲ နေရာကိုချိန်လိုက်
E ထဲကနေဘဲ ကောင်မရေ ငါကတော့ အတွင်းခံဘောင်ဘီဘာအရောင်လေးဝတ်လာမယ်
E ထဲကနေဘဲ ကောင်မရေ ငါကတော့ ဘုတ်ပဲမကြီးဟ ဆိုပြီးတော့ လုပ်ကြပေါ့
လောလောဆယ် ကြိုက်သလောက်စားပြီး ကျသလောက်ရှင်းထားကြပါ
ကျွန်တော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ သင့်တော်ရာသူတစ်ဦးသီးထံကို ငွေလွှဲပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကျွန်တော့မှာလည်း ခလေးတွေ အကြွေးတွေနဲ့မို့ ငါးဆယ်ဒေါ်လာထက်ကျော်လျှင်တာဝန်မယူပါ။
E ထဲကနေ သဂျီးမှ အာမခံပေးပါလိမ့်မည်။
( ဒါက အရည်ချင်းစစ်တဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲလို့လဲခေါ်တယ်ဗျ ပါးပါးလေးပါ
လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက် စွမ်းစောင်နိုင်သလဲဆိုတာပြတဲ့ပွဲလေးပါဘဲ
လူဆိုး …တချိန်လုံး E ပဲ အော်နေတယ်…။
အဲ့လို ခေါ်တဲ့လူ …သူပြီးလျှင် အဘပုက ဒုတိယလူနော်
feel sad for Moon poem.
ကိုင်း… moonpoem ရေ
ကျွန်တော်ကတော့ အင်တာနက် မသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် စာတွေတောင် သိပ်မတင်ဖြစ်တော့ပါဘူး
ဒါပေမယ့်မနေ့ကတော့ အဲဒီဆိုင်ထဲမှာ ၀င်ပေါက်ကနေ လှမ်းဝင်လိုက်ရင် မြင်နေရတဲ့ ထောင့်ဆုံးက Sofa ခုံမှာ ထိုင်နေတဲ့ (တစ်ယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ:D)၊ ၁၂း၀၀ ထိရှိနေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ ဦးထုပ်အနက်ဆောင်းပြီး ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်နေတာပါ။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်လဲ မှတ်မိလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. ဘယ်သူဆိုတာကို.. ရောက်အောင်လာခဲ့တယ်နော်.. ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်.. ရန်ကုန်မှာ ဒီလကုန်ထိ ရှိနေပါဦးမယ်.. ဒီအတောအတွင်းမှာတော့ စာတွေရေးဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ
ဒါဆို ဟိုနေ့က ဓနမင်းနားမှာတွေ့ လိုက်တာ ရှုံးလူ လို့ထင်မိတယ် ဟုတ်နေမလား ???? @_@
တွေ့မယ်လို့ပြောတဲ့ ရှုံးနိမ့်သူက လာတဲ့သူကို ဘာလို့သွားပြီး မခေါ်တာလည်းဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်…
MG ကမှန်းလဲသိရက်နဲ. ပြီးတော. ဒီပွဲကိုစပြီးအကြံပြုခဲ.တဲ.သူတစ်ယောက်အနေနဲ. အစ်မ ကို
member တွေ တွေ့ဆုံပွဲရှိတာ ဖတ်လိုက်ရပေမဲ့နောက်နေတာလို့ထင်တာ … တစ်ကယ့် gathering တစ်ခုလို သေချာ ဖိတ်တာ ကြေငြာတာမျိုးလဲ မရှိတော့လေ … ဆုံချင်ပါတယ် .. နောက်တစ်ကယ်စီစဉ်တာဆို လာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာပါ့မယ် ..
ခုလောက်ဆိုငါတို့ M G ကလူတွေဝိုင်းကတော်တော်များနေပီပေါ့လို့ထင်တာလေ။
တကယ်လဲရောက်ရော လူအများဆုံးရှိတဲ့ဝိုင်းကိုကြည့်တော့ ၄ယောက် ၃ယောက်
ရန်ကုန်မှာလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ လူမှဆုံဘူးတစ်ယောက်ဘဲလာတာဆိုတာ moonpoem ကိုချီးကျူးပါတယ်။
ကတိတည်တဲ့အတွက်။ ညီမလဲမန်းလေးမှာမန်ဘာတွေ့ဆုံပွဲကျရင် ညီမလဲရောက်အောင်သွားချင်တယ်။
ညီမတို့မန်းလေးက မန်းသားကြီးဦးပေါက်ကို မန်ဘာတွေ့ဆုံပွဲမှာ အကြီးအမှူး ခန့်ထားလိုက်မယ်လေ။
mayhtet ကမန်းလေးကပဲလား…မိနှင်းလေးလဲမန်းလေးကပဲနောက်ဆယ်ရက်လောက်နေရင်မန်းလေးပြန်ဖြစ်မယ်…အဲမှာလေးပေါက်ကိုပြောပြီးတွေ့ ရအောင်လေ
မိနှင်လေးကလဲ မန်းသူလေးလား မေထက်ကလဲ မိနှင်းလေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဦးပေါက်နဲ့သွားတွေ့မယ်လေ
မန်းသူ/မန်းသား မောင်နှမတွေ တွေ့ဆုံကြမယ်လေ
အင်း ဟုတ်တယ် တို့ မန်းသား/မန်းသူ တွေ ဆုံကြမယ် ဘယ်မှာဆုံမလဲပြောကြပါ.. ကျွန်တော်လဲ မန်းသားဗျ ..ဒီရွာထဲ လိုက်လိုက်မန်းနေတာ….:)
မနောဖြူ ၀င် ဖော မှပဲ ၀က်ကလေး လကဗျာလဲ မွန်းပါဝါ ဖြစ်တော့တယ်။
ဩော် တပ်မ၇၇ ကလည်း မျက်မှန်တပ် ထားရပါတယ်ဆိုနေမှ…
သတ္တိရှိရှိနဲ့  ကတိအတိုင်း တစ်ယောက်တည်း လာထိုင်စောင့်သွားရှာတဲ့ Moonpoem ကို လေးစားချီးကျူးပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်မိပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းကြောင်နေမဲ့အဖြစ်ကို မြင်ယောင်မိရလို့ စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိပါတယ်။ mnoe ကတော့ ဒီလိုချိန်းကြတာကို နောက်တယ်လို့မထင်ဘဲ တကယ်လာကြမယ်ထင်တာ။ ပြီးတော့ ရွာထဲမှာ ကိုယ်ကပဲသူများတွေကို သိပြီးတစ်ဘက်သက်ရင်းနှီးနေရတာလေ။ သိပ်ဝင်မပြောဖြစ်တော့ ပြောပြရင်တောင် ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှန်း ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်လာမယ်မလာဘူးပြောနေကြတာတွေကို ၀င်မပါဘဲ နားထောင်ရင်း အဲဒီနေ့ တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း စောင့်ဖတ်နေတာ။ လကဗျာရဲ့ စာလေးကိုဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ တိတ်တိတ်လေးဘေးက သွားကြည့်ဖို့စဉ်းစားမိသေးပေမဲ့ နေမကောင်းလို့ အိမ်ထဲမှာပဲရင်ခုန်နေမိပါတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမှမလာပေမဲ့ စိတ်တောင်မဆိုးရှာတဲ့ ညီမလေးကို ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ ရွာသား အဲ ရွာသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်။ အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရကြပါစေလို့ …။
ဲမပြောပါနဲ့ တော့ ငိုချင်တယ် ရွှတ်ဖတ်
မလာဖြစ်ဘူးလို့ email နဲ့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပါကြောင်း
တွေးမိတိုင်း ၀မ်းနည်းတယ် ပြောပါနဲ့ တော့
ကျွန်တော် King မှ လူသိရှင်ကြား
” တောင်းပန်ပါ၏ ”
မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုတဲ့ပို့စ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ etone ရေးထားတာရှိတယ် မူပိုင်ခွင့်တောင်း
ဒီ ပို့စ ကိုဖတ် ပြီး moonpoem တယောက် ကိုလေးစားမိ တယ် ။ ဖြူစင်ပြီးသတ္တိရှိ တယ် ။ ကျန်သူ တွေကို ဘယ်လိုယုံ ရမှာ လဲ ။ မသွားနိုင် လဲထားပါတော့ ရောက်ရဲ့သား နဲ့ … တကဲ့လူချောင်းပွဲ ပဲ…
moonpoem အမ ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး ။ အကယ်၍ များ မန်းလေးကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ ရင် ကျနော့်
အိမ်ကိုလာလည်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့ တွေ့ မတွေ့ တွေ့ ကျနော်ကိုတော့ သေချာပေါက်တွေ့
လို့ရပါတယ်။ မန်းလေးမှာ ပွဲမလုပ်ဖြစ်လည်း အမနဲ့ ကျနော် တွေ့လို့ရပါတယ်။ ဒီပုံတိုင်းဆို မန်းလေးပွဲလဲ
အော် အမ ကျနော်က မိန်းကလေးပါ။ မန်းလေးသူ ဆိုတော့ ကျနော်ကျနော်နဲ့ အကျင့်ပါပြီး ရေးလို့ ရွာသား
ထင်နေတာပါ။ ကျနော်ရွာထဲ ကစာတွေဖတ်ဖြစ်တာတော့ အတော်ကြာပါပြီ။ အသင်းဝင်ထားတာတော့
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲ စောင့်နေရတာ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ စိတ်လည်းမကောင်းဘူး။ အမကတိ တည်တာကို လည်းလေးစားပါတယ်။
ကတိဆိုတာမျိုးက လူတိုင်းတည်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ လွယ်လွယ်ပေးပြီး လွယ်လွယ်ဖျက်တဲ့သူ က
အများကြီးပါ။ အမရဲ့ သတ္တိ ကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။
ကိုတညင်သားကတော့နော် မန်းသူတွေကို ဘာထင်နေလဲ။
မန်းသူကိုတော့ မန်းမယ်မကြံနဲ့ :D
တကယ်လို့များ မန်းလေးမှာတွေ့ဆုံပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်္ကြန်နားနီးရင် စီစဉ်မယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိစေချင်ရင် အခန်းထဲဝင်ခါနီး ဟော်လိုဝင်းပွဲတော်မှာတပ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးတပ်လာမယ်။
အကောင်းဆုံးတွေ့ဘို့နေရာကတော့ မန်းတောင်ခြေက သုဓမ္မာဇရပ်မှာဆုံမယ်။